आइसीयू र भेन्टिलेटरमा संक्रमितको संख्या किन कम भएन? नेपालमा कोरोना संक्रमितको ग्राफ दैनिक ओरालो लाग्दैछ। हाल दैनिक ५ सयभन्दा तलको संख्यामा मात्र संक्रमित भेटिने गरेका छन्। तर यसको अनुपातमा आइसीयू र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने बिरामीको संख्यामा भने त्यति कमी आउन सकेको छैन। शुक्रबार, कात्तिक २६, २०७८
भ्याक्सिन भरोसा (कति आयो, कति आउँदै छ?) सरकारले पहिलो चरणको खोप अभियान अन्र्तगत देशभरका स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शव सवारी चालक, सुरक्षाकर्मीलगायतका १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाएको थियो। बुधबार, कात्तिक २४, २०७८
के कोभिडको पूर्ण खोप लगाएका मानिसहरूको कोभिडबाट मृत्यु हुन्छ? अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री कलिन पावेलको गत कात्तिक १ गते कोभिड-१९ सम्बन्धित स्वास्थ्य जटिलताको कारण मृत्यु भएपछि कोभिड विरुद्धको खोपको प्रभावकारितामाथि चलिरहेको बहस फेरि चुलिएको छ। मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८
नयाँ महामारी आउन सक्ने शंका गरिएको के हो ‘लङ कोभिड’? कसलाई छ कति खतरा ? अन्य देशको जनजीवन पनि क्रमशः सामान्यतर्फ जाँदैछ। यो खुसीको कुरा हो। तर, यस्तो बेला कुनै खराब खबर छ भने त्यो पनि कोरोना महामारीसम्बन्धी नै हुनसक्छ।लसायद हामी छिटै एउटा नयाँ प्रकारको महामारीको सामना गर्न गइरहेका छौँ। वैज्ञानिकहरुले यो संभावित महामारीलाई ‘पोष्ट कोभिड-१९ कन्डिसन’, ‘एक्युट कोभिड-१९’ वा ‘लङ कोभिड’ नाम दिइरहेका छन्। मंगलबार, कात्तिक २, २०७८
कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम संचालन गर्दाका ती क्षण त्यो समयमा हामीलाई एलिट ग्रुपले कसरी दुख दियो भने, सुरुवातबाट उसले खोप स्वीकारेन। पछि हामी चाँहि कार्यक्रमलाई प्रभाव नै पर्ने गरी दवाव थियो। सोमबार, कात्तिक १, २०७८
कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम: दसैँ र बालबालिका तेस्रो लहरमा बालबालिकाहरू बढी प्रभावित हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन समेत दिएको छ। मंगलबार, असोज २६, २०७८
नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरियन्ट कमजोर हुँदै गएको हो? निकै संक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको डेल्टा भेरिन्टले एक व्यक्तिबाट ५ देखि ७ जना व्यक्तिलाई कोरोना सार्न सक्ने डा पौडेलले बताए। सोही कारण पनि डेल्टा भेरियन्ट छिटो फैलिएको उनले बताए। शनिबार, असोज २३, २०७८
कोरोनाविरुद्धको खाने औषधि परीक्षण: अस्पताल भर्ना हुने र मृत्युको जोखिम आधा कम गर्ने दाबी परीक्षणको क्रममा रहेको एक औषधिले कोभिड–१९ को संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना हुने वा मृत्युको जोखिमलाई आधाले कम गर्ने दाबी गरिएको छ। शनिबार, असोज १६, २०७८
कोरोनाको डेल्टा भेरियन्ट के हो? बालबालिकालाई यो भेरियन्टको संक्रमण हुने सम्भावना कति? कोभिड-१९ को डेल्टा भेरियन्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले भिरयन्ट अफ कन्सर्न भनेको छ। किनकि डेल्टा भेरियन्ट पहिचान गरिएका ठाउँहरुमा सो भेरियन्ट मानिसहरुबीच द्रुत गतिमा फैलिएको छ। बुधबार, असोज १३, २०७८
कोरोना महामारीले बढायो आत्महत्या, १४ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि कोरोना महामारी र लकडाउनको समयमा अधिकांशले आफ्नो बेरोजगार भए। आफन्त गुमाए। धेरैलाई दुई छाक टार्न पनि धौँ-धौँ भयो। वर्तमान र भविष्यको चिन्ताले धेरैलाई एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता मानसिक समस्याहरु देखिए। मंगलबार, भदौ २२, २०७८
कोभिड युनिफाइड (वीर) अस्पतालमा कोभिड र ननकोभिड सेवा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? (भिडियो) वीर अस्पतालको पुरानो भवन परिसरमा कोरोना परीक्षण गर्ने तथा उपचारका लागि आउने बिरामीको भिड देखिन्थ्यो। कोरोना संक्रमतिकै चाप बढेकाले अस्पतालमा ननकोभिड सेवा समेत प्रभावित भएको थियो। बुधबार, भदौ १६, २०७८
निश्चित समयपछि भाइरस कमजोर हुनुपर्ने हो, तर यो झनै आक्रामक बन्दै गइरहेको छः डा सन्तोष दुलाल बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा कहिले काँही ती भाइरसहरुलाई मार्न शरीरले उत्पादन गरेको बम पड्किएर ती भाइरसहरु मात्र मार्दैन। आफैँलाई पनि मार्छ। यसले गर्दा ‘सिस्टमिक’ फेलिएर हुने, अंगहरु खराब हुने हुन्छ। सोमबार, भदौ ७, २०७८
तेस्रो लहरको जोखिमः यसरी थपिँदै छन् २० वर्ष मुनिका संक्रमित (१५ दिनको तथ्यांक) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो दुई सातामा देशभर ५१ हजार ७१५ संक्रमित भेटिए। जसमध्ये ५ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार २८ जना २० वर्ष मुनिका छन्। यो हिसाबले हेर्दा दैनिक तीन हजार संक्रमित भेटिँदा त्यसको करिब साढे पाँच प्रतिशत संक्रमित २० वर्ष मुनिका हुने गर्छन्। बिहीबार, भदौ ३, २०७८
विश्वमा झन् बढ्यो कोरोना : कतै तेस्रो, कतै चौथो लहरको त्रास अहिले दक्षिण कोरियामा चौथो वेभ आएको बताइएको छ भने बेलायतमा तेस्रो वेभको कष्ट पुनःशुरु भएको छ। अनि अमेरिका गएको महिनासम्म कोरोनाबाट लगभग मुक्त हुने हो अपेक्षा गरिएकाे भएपनि अहिले फेरि सङ्क्रमित बढ्न थालेका छन्। केही समयअघि अमेरिकीलाई मास्क नलगाए पनि हुने भनिएकामा अहिले फेरि विभिन्न राज्यमा मास्क अनिवार्य गर्ने काम भइरहेका छन्। बुधबार, साउन २०, २०७८
तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणमा बालबालिकामा किन बढी जोखिम? व्यवहार परिवर्तनका कुरा र खोपको कारणले पनि बालबालिकाभन्दा युवा वर्ग बढी सुरक्षित रहनसक्ने देखिन्छ। त्यसैले बालबालिकामा बढी संक्रमण बढी हुनसक्छ। बिहीबार, साउन १४, २०७८
महिनावारीको समयमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन मिल्छ? महिनावारीको समयमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे अन्यौलता सिर्जना भएको पाइएको छ। आइतबार, साउन १०, २०७८
यस्तो छ, कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिएको कोरोना गार्डको वास्तविकता कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने भनी प्रचार गर्दै गत साता नेपालमा भित्रिएको कोरोनागार्ड नामक उपकरणले भ्रामक दाबी गरेको पाइएको छ। मंगलबार, साउन ५, २०७८
काठमाडौंका खोप केन्द्रः प्रधानमन्त्री पुग्दा व्यवस्थित, अन्य समय भिडभाड! जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ लाख ४६ हजार ५२४ जनालाई लगाउने लक्ष्य छ। काठमाडौंका लागि हाल २७ हजार ८४० भाइल खोप प्राप्त भएको थियो। जान्सनको खोप एक भाइलमा पाँच जनासम्म लगाउन मिल्छ। सोमबार, साउन ४, २०७८
नेपालमा अझै किन कम भएन सिकिस्त संक्रमितको संख्या? अहिले दैनिक २ हजार ५ सय संक्रमित भेटिँदा पनि आइसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्ने संक्रमितको संख्या ७ सय हाराहारीमा हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। शुक्रबार, साउन १, २०७८
कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको इन्टरलेउकिन–६ ब्लकर औषधिले कसरी काम गर्छ? विभिन्न परीक्षणबाट कोरोना विरुद्ध उपचारका लागि प्रभावकारी पुष्टि भएको भन्दै डब्लुएचओले इन्टरलेउकिन–६ ब्लकर औषधि सिफारिस गरेको हो। सोमबार, असार २८, २०७८
के हो पोस्ट लकडाउन एन्जाइटी? ७ लक्षण र समाधानका उपाय लकडाउनपछि पुनः सामान्य दैनिकीमा फर्कने क्रममा हुने एक किसिमको एन्जाइटी नै पोस्ट लकडाउन एन्जाइटी हो। शुक्रबार, असार २५, २०७८
बजारमा फेरि अव्यवस्थित भिड, संक्रमण बढ्ने खतरा: जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र गराउने कसले? बढ्दो भिडभाड र चहलपहल हेर्दा मानिसहरु आफैं बेपर्वाह देखिन्छन्। न त दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम भएको देखिन्छ न त मास्कको उचित प्रयोग नै। शनिबार, असार १९, २०७८
बालबालिकामा बढ्दै पोस्ट कोभिड ‘एमआइएस– सी’ को समस्या, कान्तिमा मात्र ४४ जनाको उपचार कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा आरपी बिच्छाका अनुसार हालसम्म १५१ जना बालबालिका कोरोना उपचारका लागि भर्ना भएका छन्। जसमध्ये ४४ जनामा एमआइएस–सीको समस्या देखिएको छ। शनिबार, असार १२, २०७८
४३ दिन अस्पताल बसेर कोरोना जितेका तेजबहादुर, भन्छन्- नयाँ जीवन पाएँ कोरोनासँग जित्न आत्मविश्वास, राम्रो उपचार र आफन्तको साथ सबैभन्दा ठूलो औषधि भएको उनी सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘मैले नयाँ जीवन पाए। यो मेरो नयाँ जीवन हो।’ बिहीबार, असार १०, २०७८
भाइरल भिडियोको भित्री कथा– धन्न खोप खोलाले बगाएन! यसै त खोपको यस्तो अभाव छ। त्यो खोप खोलामा झरेको भए त निकै ठूलो नोक्सानी हुन्थ्यो। सबैतिरबाट स्पष्टीकरण सोध्ने, जागिरै धरापमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्थ्यो। आइतबार, असार ६, २०७८
कोरोनाको दोस्रो लहर कहिले सकिन्छ? ‘कोरोनाको जोखिम अहिले पनि उत्तिकै छ। जोखिम भएपनि हाल संक्रमण दर अलि कम हुँदै गएको छ। आगामी दिनमा पनि यो संख्या घट्दै जान्छ। तर ढुक्क भएर हिँड्न मिल्दैन।’ बुधबार, असार २, २०७८
कोभिड खोपले शरीरमा चुम्बकीय शक्ति दिने गलत दाबी कोभिड-१९ को खोपले शरीरलाई चुम्बकीय बनाउँछ भन्ने भ्रामक भिडियो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर फैलिरहेको छ। यस्ता सूचनामाथि विश्वका तथ्य जाँचकी संस्थाले खोजबिन गरेका छन्। मंगलबार, असार १, २०७८
‘तेस्रो लहरको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिका लक्षित तयारी गरेका छौं’ प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा संगीता भण्डारीले तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको लागि अस्पतालको उपचारात्मक सेवालाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिइन्। सोमबार, जेठ ३१, २०७८
अक्सिजन प्लान्टदेखि तत्कालिन आवश्यकताका सामग्री सहयोग गरिरहेका छौं: डा भुपेश खड्का कसरी नेपालमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँ कुराहरु उठायौँ। एस्ट्राजेनिकाको भ्याक्सिजन कसरी नेपालसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर त्यसबारेमा एड्भोकेसी भइरहेको छ। मंगलबार, जेठ २५, २०७८
पेटमा अड्किएको चम्चा नर्भिकका चिकित्सकले बिना शल्यक्रिया निकाले १६ घण्टा पहिले